दुलहीले बिवाह अस्वीकार गरेपछि दुलहासँग आमाले नै बिहे गरिन् ! - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / दुलहीले बिवाह अस्वीकार गरेपछि दुलहासँग आमाले नै बिहे गरिन् !
दुलहीले बिवाह अस्वीकार गरेपछि दुलहासँग आमाले नै बिहे गरिन् !
संसारमा हुन नसक्ने भन्ने सायद केहि पनि छैन होला । कहिले काही त हाम्रै अगाडी त्यस्ता पनि घटना पनि घट्ने गर्दछन कि जसको बारेमा हामीले कल्पना सम्म गरेका हुदैनौ । आज हामि यस्तै एक घटनाको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलहालाई देखेपछि दुलहीले आफूमाथि धोका भएको विवाह नै अस्विकार गरिन् ।
दुलहीले बिवाह अस्वीकार गरेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । त्यतिबेला आमाले छोरीलाई ठूलो दबाब दिइन् तर उनले मानिनन् । निकै सम्झाएपछि पनि जब छोरी मानिन् तब दुलहीकी आमा नै दुलहासँग आगरा गइन् ।
१७ वर्षीया दुलहीले यसै वर्ष १२ कक्षाको परीक्षा दिएकी छिन् । ती युवतीकी आमाले आगरामा बस्ने आफ्नी काकीकी नन्दका छोरासँग उनको सम्बन्ध तय गरेकी थिइन् । मार्च १० तारिखको बेलुकी आगराबाट दुलहीको घर पुगे ।
उडिरहेको प्लेनबाट खसे यात्रु
अमेरिकीमा ७ महिना शिशु बने मेयर
श्रीमतीको निधन भएको घण्टामै श्रीमानले पनि छोडे संसार, मायाको कि संयोगको खेल !
प्रेमीले अस्पतालमा आउने भएपछी बिरामी युवतीले गरिन् ‘हेभी मेकअप’
सिन्धुलीमा १५ वर्षीयलाई जन्मकै’द फैसला